Nepal Auto | के हो इथानोल ? यस्तो छ इथानोलको फाइदा र बेफाइदा
के हो इथानोल ? यस्तो छ इथानोलको फाइदा र बेफाइदा 1 Shrawn, 2076
हालै टीभीएसले पहिलो इथानोलबाट चल्ने बाइक अपाचे आरटिआर २०० एफआइ ई१०० लन्च गरेको छ । इथानोल एक प्रकारको इन्धन हो जसले प्रदूषण कम गर्नुका साथै यसले गाडी पनि चलाउन सकिन्छ ।
इथानोल एक प्रकारको अल्कोहल हो जसमा पेट्रोल मिलाएर गाडीमा इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । इथानोल मुख्यतया ऊखुबाट तयार पारिन्छ । यसको खेती गरिन्छ र पर्यावरणको लागि फाइदा हुन्छ । नेपालमा पनि ऊखु खेती हुने स्थानमा इथानोल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
इथानोलको प्रयोगले ३५ प्रतिशत कम कार्बन मोनोअक्साइडको उत्सर्जन हुने गर्छ । साथै सल्फर डाइअक्साइड र हाइड्रोकार्बनलाई पनि कम गराउन मदत गर्छ । इथानोलमा ३५ प्रतिशत अक्सिजनको मात्रा हुने गर्छ । इथानोल इन्धनको प्रयोगले नाइट्रोजन अक्साइड उत्सर्जन कम गराउँछ ।
इथानोल इको फ्रेन्डली इन्धन हो र पर्यावरणलाई जैविक इन्धनबाट हुने खतरालाई सुरक्षित राख्न मदत गर्छ । सो इन्धन ऊखुबाट तयार पारिन्छ । कम लागतमा अधिक अक्टेन नम्बर दिन्छ र एमटीबीइ जस्ता खतरनाक इन्धनको लागि विकल्पको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले इन्जिनको गर्मीलाई पनि बाहिर फ्याक्ने काम गर्छ । इथानोल फ्युल वातावरण र गाडीको लागि निकै फाइदाजनक र सुरक्षित रहेको छ ।
ब्राजिलमा लगभग ४० प्रतिशत गाडीहरुमा १०० प्रतिशत इथानोलको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । साथै बाँकी गाडीहरुमा २४ प्रतिशत इथानोल मिसाएको इन्धनको प्रयोग गरिएको हुन्छ । स्विडेन र क्यानडामा पनि इथानोलबाट गाडी चलाइएको छ । क्यानडामा इथानोलको प्रयोगको लागि सरकारले थप सहायता पनि दिएको छ ।
उपत्यकामा भोलिवाट मयूरका २० ओटा सुविधायुक्त बस
काठमाडौं – भोलिवाट उपत्यकामा मयूरका २० ओटा सुविधायुक्त बस थपिने भएका छन् । रत्नप...
नेपालमा बिक्री भए प्युजोका १०० गाडी, सबैभन्दा बढी ३००८ मोडल बिक्री